မြန်အောင်သား: Huawei C8813 မှာ ၁၅၀၀ MEC SIM Card မသိတော့တဲ့ Error ဖြေရှင်းနည်း
Credit to: myanmarmobileappstore/mm-mpxteam.net နှင့် Credit ပေးထိုက်သူအားလုံးကို Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, September 06, 2013
Labels: Android, android tutorial
classic kyawsan said...
how to download Downgrade file?Pls
How to download downgrade file.
I can't download this file.Pls
I can't download this file.
ကျေးဇူး အရမ်းကိုတင်ပါတယ်အစ်ကို ကျတော်ဖုန်းက အဲ့ဒိလိုဖြစ်တာ ခဏခဏဘဲ ဆိုင်သွားပြနေရတာ ခုတော့ သိသွားပါပြိ
ကျတော်ဖုန်းက အဲ့ဒိလိုဖြစ်လို့ ဆိုင်ကိုပြလိုက်တာ b169 တော့၇ပါပြိ လိုင်းလည်းပြန်တက်ပြိ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းက factory reset လုပ်မ၇တော့ပါဘူး ခုဆိုရင် ဖုန်းက တော်တော်ကိုလေးလာပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်၇ပါလည်း ဖုန်းဆက်မေးလို့၇ရင်လည်း ဖုန်းနံပတ်လေး ပေးပါအုံးအစ်ကို ကျေုးဇူးတင်ပါတယ်
Myo Hla Htoo said...
dload ကို run လိုက်တာ Update Fail ပဲပြနေတယ်.. ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲသိဘူး
zar nie said...
အကို ပေးတာလေးအိုကေပါတယ်..ကျွန်တော်ခါတိုင်းလုပ်တဲ့နည်းလေးကနည်းနည်းလေးအဆင့်တွေများပြီးbootunlock ပါလုပ်ရတယ်..အကိုအခုပြောတဲ့နည်းကတော့အရမ်းမြန်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
C8813 B606 Firmware လေးတင်ပြီးတော့ စီကနေ
Thank alot Bro!
Y210C မှာကော အဲ့ လိုဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပေးပါဦး
Firmware တင်နေတုံး batteryအားကုန်သွားတာ ပြန်တင်မယ်လုပ်တော့ screen ကအပြာရောင်ပဲပြနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိတဲ့သူ လမ်းညွန်ပါအုံး
Htun Htun Win said...
အစ်ကိုရေ...C8813 1500 SIM fail.rar ကဘယ်လိုမှ ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်...။ ကူညီပါဦး..။
အစ်ကိုရေ...C8813 1500 SIM fail.rar ကိုတစ်ခြားလင့်လေးကနေပြောင်းတင်ပေးပါလားဗျာ ...။ ဘယ်လိုမှ ဒေါင်းမရလို့ပါ...။
အားလုံးအတွက်ပြောပါရစေ အဲ.ဒီလိုဖြစ်နေရင် firmware ပြန်ရေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ Roaming ထဲကိုဝင်ပါ။ Restore default settings ကို နှိပ်ပါ။ Restart ကျပြီး ပြန်တက်လာရင် ခဏစောင်.နေပါ။ လိုင်းပြန်တက်လာပါလိမ်.မယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ခင်ဗျား။ ကျော်ထွန်း 0973218403
hong hong said...
second file can not downlaod ,plz help bro ,reil need
can not download second file ,please help bro ,i reil needed
MG PU said...
Huawei C8813 Official Firmware B169
Credit : mpfirmware.blogspot.com
C8813 Firmware B177 Upgrade လုပ်တာ လိုင်းပျောက်သွားတယ်။ အခု B168,169 ကိုပြန်ဆင်းတာ လိုင်းတော့ပြန်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ 3G Network မရတော့ဘူးဗျာ။ အင်တာနက်သုံးတာ 3G မရတော့ မကောင်းဘူး။။ ကူညီကြပါအုံးဗျာ။ အခု B606 ကို မှေးသုံးနေရတယ်။ နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ကူညီကြပါအုံး။။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
FontCreator Professional 7.5.0 build 512 Final
One Click Root Tool Collections ၁၀ မျိုး(All Lates...
IOS7ထွက်ရှိလို့ လာပါပြီး
100 Top Paid Android Apps & Themes Pack (Eng/6 Sep...
Apple မှာ Musicနဲ့ Data တွေကို လွယ်ကူစွာ Transfer ...
မိမိတို့ကွန်ပျူတာကို virusတွေကင်းအောင် Microsoft S...
မိမိကွန်ပျူတာက Desktop Icon လေးတွေကို စီမံခန့်ခွဲေ...